iMac Pro wuxuu ku dari karaa processor-ka afaraad ee M1 oo leh CPU of 12 | waxaan ka imid mac
iMac Pro wuxuu ku dari karaa processor-ka afaraad ee M1 oo leh CPU of 12
Qolka Ignatius | | iMac, Xanta
Bishii Maarso 2021, Apple waxay joojisay iMac Pro, model ku jihaysan qaybta xirfada in Waxay ka bilaabantay 5.499 euro Taasina waxay iib ahayd 4 sano tan iyo markii la bilaabay. Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa in Apple aysan iloobin qaabkan oo ay ka shaqeyneyso jiil cusub sida aan kuu ogeysiineyno. dhamaadka December.
Marka loo eego xanta ugu dambeysay, iMac Pro ee soo socda wuxuu sii deyn doonaa moodelka afaraad ee processor-ka M1 oo leh ilaa 12 koor. Hadda, Apple waxay leedahay saddex nooc oo processor-ka M1: M1 si aad u qalajiso, M1 Pro iyo M1 Max. Qaabka afraad wuxuu ka iman lahaa iMac Pro.
Waxaan helay xaqiijin ah inay jiri doonto qaabayn dheeri ah oo loogu talagalay iMac Pro ee soo socda ee ka baxsan M1 Max. Qaabaynta 12 Core CPU ayaa lagu xidhay qayb ka mid ah koodka tixraacaya iMac. Musharaxa magacaabista gudaha waa iMac Pro sabab. Waxa loo beegsadaa dhinaca faa'iidada
Isha xantan waxaa laga helay leaker @Dylandkt, kaas oo daabacay tweet shalay Axadii isagoo sheegay in iMac Pro wuxuu ku dari doonaa processor ka awood badan midka M1 Max, Processor ka mid noqon doona 12-core CPU.
Processor-ka asalka ah ee M1, kii suuqa la yimid Mac mini, MacBook Air, iyo MacBook Pro, wuxuu leeyahay 8-core GPU oo ay la socdaan 7- ama 8-garaafyada. M1 Pro wuxuu ku daraa 8 ama 10 core CPU halka M1 Max uu ku jiro 10 core CPU oo leh Taageerada xusuusta sare iyo garaafyada garaafyada ka badan nooca Pro.
Waqtigan xaadirka ah isku darka koofiyadaha ay Apple ku bixin karto processor-kan cusub ee M1 lama garanayo, laakiin waxay u badan tahay 2 ayaa ah waxtarka tamarta sare iyo inta kale, 10 ee waxqabadka sare.
Dylandkt wuxuu sheeganayaa in moodelkaas Mac wuxuu bilaabi doonaa processor-kan cusub wuxuu noqon doonaa iMac Pro, nooc loogu talagalay xirfadlayaasha. Marka la eego processor-ka M1, isla leaker-kan ayaa sheeganaya in iPad Pro oo leh processor-ka M2 uu suuqa ku dhici doono dayrta.
M2 ee iPad Pro 2022
Malaha, M2 waxa uu noqon doonaa boodbood tiro badan marka la barbar dhigo jiilkii ugu horreeyay ee soo-saareyaal cusub oo Apple ah. Bilaw iMac Pro cusub oo wata nooc cusub oo processor-ka M1 ah si aad hadhow M2 ula soo baxdo iPad Pro (sida Dylandkt sidoo kale tilmaamay), Wax macno badan uma arko Haddii, marka lagu daro, M2-kan uu ka awood badan yahay M1-ka cusub ee iMac Pro uu sii deyn karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » iMac Pro wuxuu ku dari karaa processor-ka afaraad ee M1 oo leh CPU of 12
Sida loo wadaago Wi-Fi ka iPhone